Directory - Myanmar Internet Directory - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
Myanmar Internet Directory
There are 5583 listings and 438 categories in our website
Arts (အနုပညာ) (115)
အနုပညာ သမားများ၊ သီချင်းများ
Arts, music, and all the fun
Actors (ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်), Crafts (လက်မှု အနုပညာ), Musicians (ဂီတ အနုပညာရှင်), Photographers (ဓာတ်ပုံ ပညာရှင်), Writers (စာရေးဆရာ)
Computer (ကွန်ပျူတာ) (916)
ကွန်ပျူတာ ဖုန်း ဆော့ဝဲ ဆိုင်မျိုးစုံ
Computer shops, software, services
Associations (အသင်း), Cyber Security, CyberCafe (အင်တာနက်ဆိုင်), Data Center (သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာန), Hardware Sales (ရောင်းဝယ်ရေး), ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု), Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်းဆိုင်များ), Networking (ကွန်ယက်), Payment-Related (ငွေပေးချေမှု), PyiDaungSu font (ပြည်ထောင်စု ဖွန့်), Report Abuse (အလွဲသုံးမှု တိုင်တန်းရန်), Services (ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း), Software House (ဆော့ဝဲ ထုတ်လုပ်ရေး), System Integration (ပေါင်းစပ် ဝန်ဆောင်မှု), Training (သင်တန်းကျောင်း), Unicode Migration (ယူနီကုဒ် ကူးပြောင်းရေး), Unicode စံသုံး ဝဗ်ဆိုက်များ, Web Development (ဝဗ်ဆိုက် တည်ဆောက်ရေး)...
Directories (လမ်းညွှန်) (146)
မြေပုံ၊ ကုန်စည် ပြပွဲ မျိုးစုံ ..
Maps, trade fairs, expo, trade shows
Industrial Zones (စက်မှုဇုံ), Industry Associations (အသင်းအဖွဲ့), Investment Consultants (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု), Investment Guide (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လမ်းညွှန်), Maps (မြေပုံလမ်းညွှန်), Tradeshows (ကုန်စည် ပြပွဲ)
Education (ပညာရေး) (107)
တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်း ကျူရှင် ..
Alumni (ကျောင်းသူ/သားဟောင်း), Education Services (ဝန်ဆောင်မှု), International Schools in Yangon, Learning Myanmar Language, Monastic Education School (ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း), Schools (ကျောင်း), Tuition (ကျူရှင် သင်တန်းများ), Universities (တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်)
Entertainment (ဖျော်ဖြေရေး) (121)
ဂီတ အားကစား ဖျော်ဖြေရေး
Entertainment, music, TV, cable TV and sports
Music (သီချင်း), Music Bands (တီးဝိုင်း), Musicians (အနုပညာရှင်), Others (အခြား), Sports (အားကစား), TV Channels
Expats (ရေခြားမြေခြား) (102)
မြန်မာပြည်ရောက် နိုင်ငံခြားသားများ ...
Expatriates in Myanmar and worldwide
Americans in Myanmar, Chinese in Myanmar (中國的), French in Myanmar (les Français), Germans in Myanmar (Deutsche), Japanese in Myanmar (日本人), Koreans in Myanmar (한국의), Malaysians in Myanmar (Melayu), Myanmars in Australia (သြစတြေးလျရောက် မြန်မာ), Myanmars in India (အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ), Myanmars in Japan (ဂျပန်ရောက် မြန်မာ), Myanmars in Korea (ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများ), Myanmars in Malaysia (မလေးရှားရောက် မြန်မာ), Myanmars in Singapore (စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ), Myanmars in Thailand (ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ), Myanmars in the US (အမေရိကရောက် မြန်မာ), Singaporeans in Myanmar (Singapura), Taiwanese in Myanmar (台灣), Thais in Myanmar (ภาษาไทย), Vietnamese in Myanmar (Việt)
Government, Politics (နိုင်ငံရေး) (175)
အစိုးရ နှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ
Cabinet (ပြည်ထောင်စု အစိုးရ), Judges (တရားသူကြီးများ), Lower House (ပြည်သူ့ လွှတ်တော်), Political NGO (နိုင်ငံရေး အဖွဲ့များ), Political Parties (နိုင်ငံရေး ပါတီများ), Upper House (အမျိုးသား လွှတ်တော်), Ayeyarwady Gov (ဧရာဝတီတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ), Ayeyarwady Parliament (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်), Bago Gov (ပဲခူးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ), Bago Parliament (ပဲခူးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်), Chin Parliament (ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်), Chin State Gov (ချင်း ပြည်နယ် အစိုးရ), Foreign Missions (နိုင်ငံခြားသံရုံး), Kachin Parliament (ကချင် ပြည်နယ် လွှတ်တော်), Kachin State Gov (ကချင် ပြည်နယ် အစိုးရ), Kayah Parliament (ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်), Kayah State Gov (ကယား ပြည်နယ် အစိုးရ), Kayin Parliament (ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်), Kayin State Gov (ကရင် ပြည်နယ် အစိုးရ), Magway Gov (မကွေးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ), Magway Parliament (မကွေးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်), Mandalay Gov (မန္တလေးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ), Mandalay Parliament (မန္တလေးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်), Ministries (ဝန်ကြီးဌာန), Mon Parliament (မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်), Mon State Gov (မွန် ပြည်နယ် အစိုးရ), Myanmar Embassies (မြန်မာသံရုံး), Naypyidaw Gov (နေပြည်တော်ကောင်စီ), Rakhine Gov (ရခိုင် ပြည်နယ် အစိုးရ), Rakhine Parliament (ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်), Sagaing Gov (စစ်ကိုင်းတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ), Sagaing Parliament (စစ်ကိုင်းတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်), Shan Gov (ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ), Shan Parliament (ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်), Tanintharyi Gov (တနင်္သာရီတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ), Tanintharyi Parliament (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်), United Nations (ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ), Yangon Gov (ရန်ကုန်တိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ), Yangon Parliament (ရန်ကုန်တိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်)...
Health (ကျန်းမာရေး) (75)
ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ဌာနများ
Health realated web sites
Ambulance / လူနာတင်ယာဉ်, Blood Donation / သွေးအလှူခံ ဌာန, Corona Virus Control / ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ထိမ်းချုပ်ရေး, Hospitals/ Clinics (ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း), Organizations (အဖွဲ့အစည်း), Pharmaceutical (ဆေးဝါး)
Hotels & Office (ဟိုတယ်) (244)
မြို့အလိုက် ဟိုတယ်များ၊ အငှား ရုံးခန်း နေရာများ
Hotels, motels, office complex
Hotels -- others (အခြား မြို့များ), Hotels in Bagan (ပုဂံရှိ ဟိုတယ်), Hotels in Inle (အင်းလေးရှိ ဟိုတယ်), Hotels in Mandalay (မန္တလေးရှိ ဟိုတယ်), Hotels in Mergui Archipelago (မြိတ်ကျွန်းစု), Hotels in Naypyitaw (နေပြည်တော်), Hotels in Ngapali (ငပလီ ဟိုတယ်များ), Hotels in Ngwe Saung (ငွေဆောင်), Hotels in Yangon (ရန်ကုန်ရှိ ဟိုတယ်), Office Rental in Yangon (ရုံးခန်း အငှား)
Investment (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) (10)
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖိတ်ခေါ်သူတွေနဲ့ အများပိုင် လုပ်ငန်းကြီးများ
Best places to invest in Myanmar
Public Companies (အများပိုင် ကုမ္ပဏီ), Start-ups (တက်သစ်စ လုပ်ငန်းများ)
Manufacturers (ကုန်ထုတ်) (155)
စက်ရုံ အလုပ်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ မှန်သမျှ
factories, producers, etc.
Agricultural (စိုက်ပျိုးရေး), Beverages (အဖျော်ယမကာ), Food (စားသောက်ကုန်), Furniture (ပရိဘောဂ), Garment (အထည်ချုပ်), Gems (ကျောက်မျက်ရတနာ), Livestock (မွေးမြူရေး), Others (အခြား), Seafood (ရေထွက်ကုန်), Timber (သစ်လုပ်ငန်း)
Media (စာနယ်ဇင်း) (221)
ရုပ်မြင်သံကြား မဂ္ဂဇင်း ..
Advertising (ကြော်ငြာ လုပ်ငန်း), Classifieds, Magazines (မဂ္ဂဇင်းများ), Myanmar eBooks, News (သတင်း), TV-Radio (ရုပ်မြင်သံကြား/ ရေဒီယို), Weekly Journals (ဂျာနယ်များ)
NGO, INGO (အသင်းအဖွဲ့) (295)
ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ကစပြီး ရေချမ်းစင်အသင်းထိ
NGO for CSR, health, education, etc.
Education NGO (ပညာရေး), Environment NGO (ပတ်ဝန်းကျင်), Health NGO (ကျန်းမာရေး), Humanitarian (လူသားချင်း စာနာမှု), Industry Associations (လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းများ), Orphanage (မိဘမဲ့ ဂေဟာ/ကျောင်း)
People (လူမှုရေး) (148)
လူမှုရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား စာမျက်နှာများ စုစည်းမှု
Web sites for people and pages in ethnic nationality languages
Bago (ပဲခူး), Chin sites (ချင်း ဝဗ်ဆိုက်များ), Food & Cooking (ချက်ပြုတ်နည်း), Kachin sites (ကချင် ဝဗ်ဆိုက်များ), Kayah sites (ကယား ဘာသာ ဝဗ်ဆိုက်များ), Kayin sites (ကရင် ဝဗ်ဆိုက်များ), Magway (မကွေး), Mon sites (မွန် ဝဗ်ဆိုက်များ), Others (အခြား), Personal home pages/blogs (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ), Rakhine sites (ရခိုင် ဝဗ်ဆိုက်များ), Shan sites (ရှမ်း ဝဗ်ဆိုက်များ)
Product Reviews (ကုန်ပစ္စည်း မှတ်ချက်) (0)
ရှောင်ရမည့် တားမြစ် ဆေးဝါး၊ စားသောက်ကုန်များ
Banned Drugs (ပိတ်ပင်ဆေးဝါးများ), Banned F&B Brands (ပိတ်ပင် စားသောက်ကုန်), Made-in-Myanmar (မြန်မာပြည်ဖြစ် ထုတ်ကုန်များ)
Religious (ဘာသာရေး) (90)
ဘာသာရေး ဂိုဏ်းများ၊ ဘုန်ကြီးကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဗလီ
Churches, monasteries, mosques
Buddhist (ဗုဒ္ဓဘာသာ), Buddhist - Mahayana (မဟာယန), Christian -- Anglican Churches (အင်္ဂလီကန်), Christian -- Baptist Churches, Christian -- Catholic Churches (ကက်သလစ်), Christian -- Jehovah’s Witnesses (ယေဟောဝါသက်သေများ), Christian -- Seventh Day Churches (သတ္တမမြောက်နေ့), Hindu Temples (ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းများ), Islam -- Shia Mosques (ရှီရာ ဗလီများ), Islam -- Sunni Mosques (ဆူနီ ဗလီများ), Others (အခြား)...
Restaurant (စားသောက်ဆိုင်) (99)
စားသောက်ဆိုင် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ
Myanmar Restaurant Reviews and Rating
FDA Warnings (မစားရ), in Bagan (ပုဂံ), in Mandalay (မန္တလေး), in Yangon (ရန်ကုန်), Myanmar Restaurants in London, UK, Myanmar Restaurants in Singapore, Myanmar Restaurants in USA...
Services (ဝန်ဆောင်မှု) (770)
လူနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ပေးသမျှ
All sorts of services avalable
Accounting and Auditing (စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်), Banks (ဘဏ်), Booking, Car Dealers (ကားအရောင်းဌာန), Car Workshop (ကားပြင်), Communications (ဆက်သွယ်မှု), Construction (ဆောက်လုပ်ရေး), Consultants (အတိုင်ပင်ခံ), Cosmetic & Beauty Saloons (အလှကုန်နှင့် အလှပြင်ဆိုင်), Courier Express Service (အမြန် ချောပို့), Engineering (အင်ဂျင်နီယာ), General Services (အထွေထွေဝန်ဆောင်မှု), Insurance (အာမခံ), Investment Firms (အကြီးစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး), Job Search (အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး), Law Firms (ရှေ့နေ), Marketing (ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်ရေး), Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်း), Real Estate (အိမ်ခြံမြေ), Serviced Offices (အသင့်သုံး ရုံးခန်းများ), Shipping (သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး), Trading (ကုန်သွယ်မှု)
Shopping (ဈေးဝယ်) (77)
online shopping, departmental stores
Distribution (ဖြန့်ချိရေး), Mobile Phone Vendors (ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများ), Online Stores (အင်တာနက်ဆိုင်), Supermarket (ဆူပါမားကက်)
Travel (ခရီးသွား) (702)
Airport (လေဆိပ်), Car Rental (ကားအငှား), Cruises (အပျော်စီးသင်္ဘော), Domestic Airlines (လေကြောင်း), International Airlines (ပြည်ပ လေကြောင်း), Online Travel Agents (OTA), Others (အခြား), Tour Operators (ခရီးသွား လုပ်ငန်း), Travelogues (ခရီးသွားမှတ်တမ်း)
Uncategorized (အမျိုးအစားမသိ) (814)
အမျိုး အမည်မသိ မခွဲခြားနိုင်သေးသည့် ဆိုက်များ
All other uncategorized listings are temporarily listed in this category. These needs to be manually categorized.
Domains for Sale (ဒိုမိန်း ရောင်းမည်)
View more recently added listings
Do you use Telenor mobile ?
Which mobile telephone company (or sim card) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please let me invite you toabrief survey.
Ad Mar Digital Marketing
Visitors to MyanmarNet
Pyi Wai Shan Gold & Jewelry
Citicom IT & Mobile Sales &...